15as International gvSIG Shirka - Maalinta 1 - Geofumadas
15as International gvSIG Shirka - 1 maalin
Nofeembar, 2019 Geospatial - GIS, GvSIG, tabo cusub
15as Maalmaha Caalamiga ah ee gvSIG wuxuu bilaabay inuu dhaco Nofeembar 6, oo ka socda Dugsiga Sare ee Farsamada ee Geodetic, Cartographic iyo Topographic Engineering - ETSIGCT. Furitaanka munaasabadda waxaa fuliyay mas'uuliyiinta jaamacadda Polytechnic University, Generalitat Valenciana iyo agaasimaha guud ee gvSIG Association Alvaro Anguix. Maalmahan ayaa kaliya ku soo beegmay gvSIG Desktop 2.5, oo diyaar u ah soo dejinta.
Annaga oo ah Geofumadas waxaan go'aansannay inaan shaqsi ahaan uga qeyb-galno munaasabaddan, inta lagu gudajiro saddexda maalmood, anagoo ka warqabinna waxa barnaamijkan bilaashka ah ee software uu matalay, kaasoo maanta ahaa hindisaha ku dhashay macnaha guud ee Hisbaanigga oo leh baaxadda ugu weyn ee caalamiga ah.
Maalintii ugu horreysay ee maalinta kalfadhiga koowaad ee bandhigyada, waxaa mas'uul ka ahaa wakiilo ka socday Institut Cartografic Valencià - Generalitat Valenciana, CNIG - Xarunta Qaranka ee Macluumaadka Juquraafi ee Isbaanishka iyo shaqsiyaadka Dowlada Uruguay, oo soo bandhigtay IDE-ga Uruguay laga hirgaliyay gvSIG Online.
Intaa kadib, kalfadhigii labaad wuu sii socday, halkaas oo laga wada hadli doono IDE. Munaasabadan wakiilo ka socda Xarunta European Thematic Centre of University of Malaga ayaa soo bandhigayay daraasadooda kiis, kuwaas oo kahadlay PANACEA Noocyada MED. Kadib, Raúl Rodríguez de Tresca - IDB ayaa qaatay sagxadda, isagoo soo bandhigaya qabyada Geoportal loogu talagalay maareynta wadada ee Dominican Republic, si loo abuuro tikniyoolajiyadda taageerada ee maareynta alaabada shabakadaha wadooyinka iyo buundooyinka. Intaa waxaa u dheer, Rodriguez wuxuu sheegay muhiimada shaqadiisa ay tahay in dad badani ay yeelanayaan wacyigelinta xayawaanka,
"Waxa aan ku guuleysannay waa furitaanka maskaxda, hadda waxaa jira dad caadi ah oo ku xiran mashaariicda codsanaya ka-mid-ahaanshahooda si ay u galaan marin-habaabinta iyo soo saarista-maareynta xogta."
Isla isla mawduucaan, Ramón Sánchez de Sans2 Innovación Sostenible SL, wuxuu muujiyey gvSIG Codsi ku wajahan xakameynta kaabayaasha, taasi waa, sida loogu xirayo nidaamyada ilaalada oo lagu dhex daro GVSIG GIS oo lacag la’aan ah, si kor loogu qaado xakameynta xakameynta kaabayaasha iyo jawaabaha waxtarka leh waqtiga munaasabadda.
Qaybta saddexaad ee maalinta la xiriirta is-dhexgalka, oo uu fuliyay Joaquín del Cerro, oo ah wakiilka ururka gvSIG, ayaa soo bandhigay horumarinnada iyo casriyeynta nidaamka Maareynta shilalka iyo is-dhexgalka ARENA2 ee Agaasinka Guud ee Gaadiidka ee gvSIG Desktop. Dhanka kale Oscar Vegas, ayaa soo bandhigay Kalasaarka gacanta ee qaababka shabakadaha bixinta biyaha ee ka yimid gvSIG iyada oo gacan laga helayo qalabka loo yaqaan '' TransGISEpanet 'iyo qalabka RunEpanetGIS, kuwaas oo ah aalado lagu abuuro moodooyinka biyo-xidheenka ee shabakadaha biyaha bixiya, ayaa la muujiyey sida loogu wareejiyo macluumaadka GIS, iyo sidoo kale fududeynta beddelka feylasha iyo soo bandhigista xogta.
Waxaan ku sii wadnaa soo bandhigida ugu dambeysa ee 4to block iyadoo la soo bandhigayo Iván Lozano de Vinfo VAL, oo ​​si muuqata u muujisay sida VinfoPol, wuxuu hagaajiyay dhammaan hanaannada guud ee saldhigga booliiska, laga bilaabo goobaha, aqoonsashada astaamaha dambiyada, jiritaanka ganaaxyo kuwa kale. Qalabkan waxaa loo habeeyay sidii shaashad, halkaas oo aad ku maamuli karto dhammaan dhacdooyinka ka dhaca aagga falka bilayska, "waxaan abuurnaa maamul dhammaystiran oo lagu maareeyo nidaamka oo dhan oo ay boolisku ka shaqeeyaan hal barnaamij."
Por último, llegamos al final de las sesiones con la temática de Dispositivos móviles. En esta sección se presentaron casos de éxito que fueron llevados a cabo con dispositivos móviles, por ejemplo, la Ing.Sandra Hernández de la Universidad Autónoma del Estado de México, desplegó información sobre la Abaabulka iyo aruurinta xogta duurka iyadoo la adeegsanayo barnaamijyada mobilada iyo aaladda, si loo qiimeeyo socodka socodka ee Xarunta Taariikhda ee Toluca. Mashruucan, kaqeybgalayaashu waxay awoodeen inay aragti ahaan kaqeeyaan shaqada duulimaadka ah ee lagu fuliyay codsiga mobilada gvSIG, oo ah mid bilaash ah kana shaqeeya khadka tooska ah iyadoo aan lagu xirin Wi-Fi ama shabakad xog, dhammaan macluumaadkaan lasoo uruuriyay gadaal ayaa laga baaraandegi doonaa laguna falanqayn doonaa gvSIG Desktop, si loo soo saaro warbixinno ku saabsan dhaqdhaqaaqa ay leeyihiin muwaaddiniinta Toluca iyo kaabayaasha ay ku hayaan gaadiidkooda bilaashka ah.
Ururka gvSIG wuxuu dhiirrigelinayaa ka mid noqoshada shirka ma aha oo keliya ururada ama shirkadaha waaweyn, laakiin waxay kaloo sameeyeen shaqo muuqata oo ka socota mid ka mid ah ardayda, Glene Clavicillas mashruuceeda Xaqiijinta sawir-gacmeedka beeraha iyadoo loo adeegsanayo falanqaynta multitemporal ee sawirrada dayax gacmeedyada iyo sawir-qaadeyaasha cadastral.
Gelinka dambe ee galabnimadii wuxuu sii watay aqoon isweydaarsiga, halkaas oo inbadan lagu qoro bilaash. Aqoon isweydaarsiga ayaa waxaa ka mid ahaa mowduucyo ay ka mid yihiin gvSIG oo loogu talagalay dadka bilowga ah, falanqaynta xogta la leh gvSIG ama ConvertGISEpanet - RunEpanetGIS - gvSIG si loogu daweeyo macluumaadka shabakadaha biyaha laga helo.
Haddii aad hal talaabo ka fog tahay Valencia, wali waxaa harsan laba maalmood; taas oo aan rajaynayno inaan ka wada hadalno wareysiyo lala yeesho ciyaartoy muhiim ah oo ina siin doona aragtidooda ku saabsan halka ay u maleynayaan in gvSIG uu mari doono sanadaha soo socda.
Post Previous«Previous Joo-Injineer & Majaladda TwinGeo - Daabacaad Labaad
Post Next 15as International gvSIG Shirka - Maalinta 2Next »